निद्रा लाग्दैन ? सुत्नुअघि शरीरको यो भाग थिच्नुस् ! - अभियान खबर
निद्राका विभिन्न प्रकार हुन्छन् र यसले मानिसलाई अनेकौं प्रकारले असर पार्छ । निद्रा बोलाउनका लागि केही मान्छे घन्टौंसम्म ओछ्यानमा यता र उता पल्टिन्छन् । ‘लौन, कुनै जादू मन्त्र पाएदेखि फुस्स निदाउँथें नि’ भनेर कल्पन्छन् यस्ता मान्छे ।
ट्रमा सेन्टरबाट बाहिरिए डा. केसी, शिक्षण अस्पतालमा भर्ना